Qeybta 1: Sidee aan mp3 waxaan dhigay ringtone ku Galaxy Samsung ee S?
Qeybta 2: Halkee download rasmi ah Samsung ringtone?
Qeybta 3: Sida loo gooyay aan music in ringtone Samsung ah
Qeybta 4: Halkee download music free
Si aad u dhigay ringtone ku saabsan telefoonka Samsung Galaxy, waxaad u baahan doontaa laptop la ah mp3 song / habayn badbaadiyey, waxa uu. Haddii kale, in mobile aad si toos ah aad kala soo bixi kartaa mp3 kasta oo midab.
Dejinta caadadii MP3 ringtone via dejinta menu
1. Haddii aadan haysan ringtone mp3 ah in aad telefoon Samsung weli oo aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan mid ka laptop, waxaa wareejiyo taasi oo ka cable USB ah. Waxaad keydsan kartaa ringtone ee meel kasta oo aad doorato. Haddii aad hore ayaa aad u jeclaystay mp3 ringtone hore u soo bixi in aad telefoon, si ay talaabo 2.
2. Tag menu goob oo waxa lagu calaamadiyaa sida qalabka qaabeeya icon ah. Dul tabs in ay hesho fursada ku tilmaamay "Sound".
3. Laga bilaabo menu in fureysaa, dooro ikhtiyaarka ah sida "Ringtones" calaamadeeyay.
4. menu A furi doonaa oo dhan ringtones in aad qalab Samsung ayaa by default. Hoos si aad u hesho ringtone mp3 in aad kaliya wareejiyo / bixi in aad Samsung Galaxy. Waxaa hubaal ah in aad uma ay heli lahaa in this menu, si ka jaftaa badhanka calaamadsan "Add".
5. dooro "dawdarka Sound" sida isha ka aad doonayso in aad ku darto ringtone mp3 ah.
6. Liiska dhammaan warbaahinta mp3 in aad telefoon furi doonaa ilaa ay ka mid yihiin heesaha oo dhan mp3 on your ururinta. Dooro sida aad doonayso inaad mp3 ringtone liiskan by waxaa laga faaiidaysanayo oo ka jaftaa "qabtay" mar aad samaysay.
MP3 ringtone Custom xiriir gaar ah
1. Aad music app default iyo dhirta si ay u helaan midab mp3 in aad rabto in aad sidii aad ringtone xiriir gaar ah.
2. Tubada button menu, button taabashada ku taalla dhinaca bidix ee button guriga. Menu A furi doonaa. Dooro oranaya "dhig sida".
3. screen A cusub u furi doona saddex doorasho ku yaal. Mid ka mid ah sida "u dagdagi Ringtone" calaamadeeyay Dooro ka dibna dooro "samayn".
4. Halkaa marka ay marayso liiska xiriirada aad furi doonaa; dooro xiriir ah in aad rabto in aad u yeelaan mp3 ah midab hadda oo la dejin doonaa sida ringtone default maxaa yeelay xiriir gaar ah.
MP3 Dejinta sida midab gaadhsiin caadadii
Dejinta file mp3 ah sida midab gaadhsiin caado ka yara duwan tahay badan u dhacna sida ringtone caadadii. Tani waa sababta ka duwan ringtones, wargelin caadadii codadka u baahan tahay in la gacanta ku daray in ay wargelinta codadka. Raac tallaabooyinkan fudud si aad u mp3 file sida midab gaadhsiin caado:
1. Download aad file mp3 jeclaaday inuu aad Samsung telefoonka gacanta ama wareejiso telefoonka gacanta isticmaalaya laptop ah ku rakiban yihiin via cable USB ah.
2. Download Tababaraha file a in aad mobile Samsung haddii aadan hore u leedahay mid ka mid ah oo u abuurtaan.
3. Meel file la doonayo mp3 in aad u baahan tahay si ay u dejiyaan sida aad gaadhsiin dhawaaqa caadadii oo nuqul ka tusmada Notifications gudaha kaydinta gudaha telefoonka ee. Haddii aadan arki buugga Notifications ah, gacanta ay abuuraan hor dayanayaan u galay file mp3 ah.
4. Tag Settings Sound farriimaha Device dooro file mp3 aad kaliya ku daray in buuga ay u qotomiyey sidii aad gaadhsiin caadadii dhawaaqa.
Lumay jecel aad Samsung ringtone kac ahayn? Ama si fudud in niyadda si aad u hesho ringtone ka dambeeyay Samsung mobile phone in aad ka weyn phone Samsung? Waxaad fudud raaci karo xiriirka hoos ku qoran iyo dhirtuba ay ka boqolaal ringtones rasmi ah Samsung. Waxaad kala soo bixi kartaa ringtones badan intii aad jeceshahay aad telefoonka Samsung oo lacag la'aan ah ka websites kuwan!
Mobile Content Free
Haddii aad qabto track dheer mp3 in aad rabto in aad googooyeen track yar mp3 kooban qayb aad jeceshahay ka track oo dhan oo keliya, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad la tashato software music tafatirka-dhamaadka sare. Wondershare Video Converter Ultimate, Waa mid ka mid xal click in aad dhibaato goynta music oo dhan. Waa ay fududahay in la isticmaalo labada laylis iyo sare users iyo bandhigaysaa a kale oo lacag la'aan ah ka kaaftoomi in software dhaqanka music tafatirka. Iyada oo taageero u ah qaabab badan 150 warbaahinta iyo awood ay ku maamulaan labada Windows iyo Mac ka hawlgala nidaamyada, Wondershare Video Converter Ultimate kharashka oo kaliya $39.95 / Year ama $49.95 haddii aad doorato in aad naftaada u hesho Times ee Meyeydaan. Waxaa lagala soo bixi karaa halkan .
Cidina ma jecla inay bixiyaan music ee soo mara ah sarraynta digital halkaas oo kaliya wax walba oo ku saabsan waxaa laga heli karaa online for free. Sidaas oo ay tahayna, websites ururin music ballaaran oo u furan waa in ay lacag la'aan ah dajinta oo dhan isticmaala dhif u yihiin. Waxaa jira magacyo waa weyn sida Pandora, Spotify iyo SounCloud Laakiin waxyaalahan waxaa loo hoorto adeegyada u baahan calaamad-tago oo hana u oggolaan kuwa isticmaala inay muusikada qalabka ay la Macmiil oo lacag la'aan ah. Si aad u fudud wax idiin, waxaan ka mid ah labo ka mid ah website-yada ugu wanaagsan ee soo degsado music free Mobile, laptop, desktop iwm in this article. Akhri si aad u badan oo ku saabsan kuwan websites weyn og.
Jamendo waa music a free ciyaaro iyo degsado website la weyn ah, la hayo ururinta music ka adduunka oo dhan. Waxay leedahay nooc kasta oo kuwan raadkaygay music ka jazz in hip hop in blues. Users xitaa songs gali kartaa ka ururinta u gaar ah si ay u website-ka halkan ka database music ah ayaa weli updated mar walba ay malaayiin users Jamedo dunida dacaladeeda.
Waxaa lagala soo bixi karaa halkan .
Soundowl, sida Jamedo, waa website music ah boqortooyada lacag la'aan ah u saamaxaya in ay dhagaystaan ​​oo kala soo bixi heeso ay doortaan in qalabka ay waqti kasta. Soundowl sidoo kale leedahay database music cajiib ah sameeyay of music ka dhan qaybaha. Soundowl sidoo kale saamaxaya kuwa isticmaala inay raad ka ururinta geliyaan in website-ka sida Jamendo.
Waxaa lagala soo bixi karaa halkan
> Resource > Samsung > 4 Talooyin inay ogaadaan oo ku saabsan Samsung Ringtone MP3